CartoDB, nke kacha mma maka ịmepụta maapụ n'ịntanetị - Geofumadas
Disemba, 2013 Geospatial - GIS, innovations, Internet na Blogs
CartoDB bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị amasị maka emebe nke maapụ ntanetị, agba agba na obere oge.
Dabere na PostGIS na PostgreSQL, dị njikere iji, ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma m hụla ... na nke ahụ bụ ebumnuche sitere na Hispanic sitere, ọ na-agbakwunye uru.
N'ịbụ onye mmepe lekwasịrị anya na GIS, ọ gafere karịa ihe m gosiri gị na mbụ FusionTables nke ahụ dabere na tebụl.
CSV .NAB: faịlụ ndịwapụrụ site na commas ma ọ bụ taabụ
SHP: faịlụ ESRI, nke ga-aga tinye faịlụ ZIP gụnyere faịlụ dbf, shp, shx na prj
KML, .MMZ si Google Earth
XLS, .XLSX nke akwa nsachi akwa, nke chọrọ isi okwu dị na ahịrị mbụ na N'ezie, naanị mpempe akwụkwọ mbụ nke akwụkwọ ga-ebubata
GEOJSON / GeoJSON nke a na-ejiwanye maka data gbasara mbara, ya mere, ọkụ na ọfụma maka web
GPX, nke a na-ejikarị maka mgbanwe data GPS
OsM, .BZ2, Ntọala Street Street
SQL, nke a bụ otu ihe ngosipụta nkwupụta SQL nke CartoDB API
Mbugo ahụ dị mfe, naanị ị ga-egosi "tinye tebụl", ma gosi ebe ọ dị. Ihe ohuru ohuru nke umu nwoke a bu ihe na-adọrọ mmasị, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na a ga-akpọ data site na diski mpaghara, kamakwa ịnabata Dropbox, Google Drive ma ọ bụ na saịtị nwere url mara; na-akọwapụta na ọ gaghị agụ ya na ijiji kama na ya ga-ebubata ya; ma ọ na-azọpụta anyị na-enwe ala na bulite ya.
Ikike ịmepụta map
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị okpokoro, ọ ga-ekwe omume igosi na a na-atụgharị ya site na kọlụm site na geocode dị ka m gosipụtara n'ihu na FusionTables, kamakwa ọ bụrụ na ọ nwere x, y coordinates. Enwere ike ịkọwa ya site na ijikọ na tebụl ọzọ site na kọlụm jikọtara ma ọ bụ site na itinye isi ihe n'ime polygons.
Ọgbọ dị iche iche na-adọrọ mmasị nanị, site na ịkọwapụta nke ga-eme ka ọ dị mfe iji dozie ọkpụrụkpụ, agba na nghọta n'ụzọ dị mfe.
Agbagowo m n’ogbe obodo dị na Honduras, ma hụ ka maapụ etu okwute dị na ya si dị bụ na mkpu na-echetara anyị ihe kpatara eji egbochi ịda ogbenye n’ọtụtụ ọnọdụ na njikọta nke gọọmentị ime obodo na-enweghị njikwa ego.
Nke a bụ otu map ahụ, na-agbasi ike.
Na mkpokọta, akụrụngwa maka nyocha na iji anya na-ahụ ihe bara uru n'ihi na ha na-enye gị ohere ịmepụta nzacha, aha, akụkọ, mezie iji koodu css na ọbụna nkwupụta SQL.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkekọrịta eserese ndị ọzọ, anyị nwere ike hazie na onye na-ahọpụta oyi akwa, akụkọ, akụkọ nchọta gosipụtara, ọ bụrụ na mpịakọta òké ga-eme ihe na mbugharị, wdg. Mgbe ahụ eme mkpirikpi url ma ọ bụ koodu itinye na koodu API.
Ọ na-akwado map dị iche iche dị iche iche, gụnyere Google Maps. Ọzọkwa ọrụ WMS na Mapbox.
CartoDB nwere sistemụ ọnụahịa enwere ike ịha, site na ụdị nnwere onwe na-anabata tebụl 5 na 5 MB. Nhọrọ ọzọ na-efu $ 29 kwa ọnwa ma na-akwado ihe ruru 50MB.
Enwere ike iji ụdị a mee ihe maka ụbọchị 14, mana ị ga-akpachara anya na ọ dị ka enweghị ọdịda; na njedebe nke oge ma ọ bụrụ na azughi atụmatụ ahụ, a na-ehichapụ data ahụ. Echere m na e kwesịrị inwe ike ịdebe nnwere onwe nnwere onwe yana mgbochi nke ikpe ahụ.
Ha nwere ikike, anyị kwesịrị ịhụ ka ọrụ si agbanwe. O doro anya na ha nwere atụmatụ ha n'akụkụ dị ka njikwa arụmọrụ, na-ebuputa usoro ndị na-akwadoghị na ndị ọzọ arụmọrụ API maka ndị ọrụ na-abụghị ndị ọkachamara, na-ejikwa ihe karịrị 4 n'egosi kwa ngosi, wdg. Maka ugbu a kachasị ụkọ chọrọ iji ngwa site na mbadamba.
Naanị nnukwu ọrụ. Ọ bụrụ na ihe a na-atụ anya bụ ịmepụta maapụ dị n'ịntanetị, na ịdị mfe na ike.
Ntụle anyị na-eme taa dị ngwa, mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ.
M na-atụ aro ka ị nwalee ọrụ ahụ, n'ihi na API ya dị ma bụrụ nke OpenSource, nke mere na maka ndị maara ihe ... ha nwere ike ịgakwuru ndị ọzọ.
Gaa na CartoDB
Previous Post«Previous Mepụta map ntuli aka na Fusiontables - na nkeji 10
Next Post 2014 - Nkowa di nkenke banyere onodu GeoNext »
2 Na-aza "CartoDB, nke kacha mma maka ịmepụta maapụ n'ịntanetị"
Daalụ maka idozi ya. Ozi ahụ kwuru na ọ bụrụ na oge ikpe ahụ agwụla, a ga-ehichapụ data niile. A ka nwere oge ịhọrọ tebụl ịhapụ ike na ụdị nnwale?
Javier Álvarez Medina kwuru, sị:
Ihe edeturu, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịkwado mgbe ị nọ n'oge ikpe nke magellan :). Nnukwu isiokwu!